လာအိုနိုင်ငံတွင် လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရသော စာသင်ခန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်နေ - Xinhua News Agency
ဗီယင်ကျန်း၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လာအိုနိုင်ငံ မြို့တော် ဗီယင်ကျန်းရှိ စာသင်ကျောင်းများသည် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လပေါင်းများစွာ ပိတ်ထားခဲ့ပြီးနောက် မူလတန်းကျောင်းများ၏ Grade5အတန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းများ၏ Grades4နှင့်7တို့အား လူကိုယ်တိုင်တက်ရသည့် စာသင်ခန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်မှုအား ပညာရေးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက အကဲဖြတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ပြန်လည်မဖွင့်မီ စာသင်ကျောင်းများအားလုံးအနေဖြင့် ပညာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရွက်ချက် ၁၀ ခုနှင့် အကြံပြုချက် ၄၀ ကျော် သို့မဟုတ် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း Vientiane Times နေ့စဉ် သတင်းစာက ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များသည် COVID-19 ရောဂါ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ စာသင်ကျောင်းများအနေဖြင့် ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချမှုရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြံပြုချက်များသည် စာသင်ကျောင်းများနှင့် ကော်မတီတစ်ခုစီအနေဖြင့် စာသင်ကျောင်းများ၏ ပြင်ဆင်မှုကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသော မည်သည့်စာသင်ကျောင်းမဆို ပြန်လည်မဖွင့်မီ တိုးတက်မှုများ မဖြစ်မနေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အကဲဖြတ်မှုကော်မတီက ပြောခဲ့သည်။
ပိတ်ထားဆဲ ကျောင်းများအနေဖြင့်မူ အဓိကဘာသာရပ်များအား အွန်လိုင်းသင်ယူမှုဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။National University of Laos သည်လည်း ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့သင်တန်းများနှင့် လုပ်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအား လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်သင်ကြားရမည်ဖြစ်သလို သင်ခန်းစာများကို အွန်လိုင်းဖြင့် သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်၏ သင်ကြားရေးများအားလုံးသည် စုစည်းစီစဉ်ထားသော နည်းလမ်းဖြင့် သင်ခန်းစာများအား ဘေးကင်းစိတ်ချမှုရှိစေရန် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးဆောင်ရွက်ချက် စံနှုန်းများအရ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
လာအိုနိုင်ငံ အစိုးရသည် စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် ထပ်မံပြင်ဆင်ရန် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များအား ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်မကုန်မီ နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် ရည်မှန်းချက်အား ရောက်ရှိနိုင်စေရန် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံရေး တွန်းအားပေးရန် ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အခြားနှီးနွယ်သည့်ကဏ္ဍများအား အစိုးရက ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
VIENTIANE, Jan. 19 (Xinhua) — Educational authorities are assessing the readiness of schools in the Lao capital Vientiane to resume face-to-face classes in Grade5of primary schools and Grades4and7of secondary schools following months of closure due to the COVID-19 outbreak.
All of the university’s teaching will take place in line with standard COVID-19 control measures, to ensure that students and staff are safe while lectures go ahead in an organized and unified way.
The government has instructed line ministries and other involved sectors to push for the rollout of COVID-19 vaccines to ensure that Laos reaches the target to vaccinate at least 80 percent of the population by the end of 2022. Enditem
Photo : Students wearing masks attend classes ataschool in Vientiane, Laos, May 19, 2020. The Lao government has announced all students nationwide can go back to schools on June 2, while final-year classes in primary, lower and upper secondary schools began on Monday. Lao Health Ministry announced its first two confirmed COVID-19 cases at its daily press conference on March 24, and so far the country has detected 19 confirmed COVID-19 cases. (Photo by Kaikeo Saiyasane/Xinhua)